100 cartons of Eggs donation & Covid -19 Antigen Test Kit donation – We Help and Care
30. July 2021 28. December 2021 / By admin
ကြက်ဥ အာဟာရ အလှူဒါနပြုခြင်းနှင့် Covid -19 Antigen Test Kit လှူဒါန်းခြင်း
We Help and Care (WHC) hat am Freitag dem 30. Juli an 100 Familien jeweils 10 Eier gespendet. Diese 1000 Eier sollen weiterhin zumindest einen Teil der Grundversorgung decken und den Menschen helfen über die Runden zu kommen.
Des Weiteren haben wir Covid Antigen Testkits im Wert von 800000 Kyat (~€400) einer lokalen Hilfsgruppe (Nanyun Volunteer Team) in der Stadt Nanyun (Autonome Region Naga im Bundesstaat Sagaing) gespendet.
Danke an alle Spender*Innen für die Unterstützung und Mithilfe bei unserer Tätigkeit. Weitere Informationen zum Spenden und unseren Projekten finden Sie auf unserer Website, https://www.wehelpandcare.org/donate/
We help and Care Organization (WHC) မှ ယနေ့ ၂၀၂၁ ဂျူလိုင် ၃၀ရက် (သောကြာနေ့)တွင် Covid – 19 ဒဏ်ခံစားနေကြရသော ပြည်သူများအတွက် တစ်အိမ်လျှင် ကြက်ဥ ၁၀လုံး ၁ကဒ် ဖြင့် အိမ်ပေါင်း ၁၀၀၊ ကြက်ဥ အလုံးပေါင်း ၁,၀၀၀ ဖြန့်ဝေလှူဒါန်းခဲ့ပြီး၊ ၂၀၂၁ ဂျူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ နန်းယွန်းမြို့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ (Nanyun Volunteer Team) အတွက် Covid-19 ရောဂါ တားဆီးကာကွယ်ရေးတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် Covid-19 ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း ကိရိယာ Test Kit အခု ၁၀၀ (တန်ဖိုး ၈၀၀,၀၀၀) အား လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပြုရသော ကောင်းမှုကုသိုလ်များကြောင့် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများ အားလုံး ဘေးအန္တရာယ်အသွယ်သွယ်မှ လွတ်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေလို့ ကျွန်ုပ်တို့ WHC မှ ဆုမွန်တောင်းအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ယခုကဲ့သို့ လှူဒါန်းနိုင်ရန် အလှူငွေများဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော အလှူဒါနရှင် အပေါင်းကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်း နှင့် ယခုလှူဒါန်းသည်ထက် ပိုမို လှူဒါန်း ကုသိုလ်ပြုနိုင်ကြပါစေရန် မေတ္တာပို့သ ဆုတောင်းပေးအပ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ အကူအညီ လိုအပ်နေသူများကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းကို အလှူငွေထည့်ဝင်ခြင်းအားဖြင့် တတ်အားသမျှ ကုသိုလ်ပါဝင်ပေးကြဖို့ လေးစားစွာ တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ https://www.wehelpandcare.org/donate/
We Help and Care Organization (WHC) has handed out 100 cartons of Eggs for the nutrition that is needed for Covid-19 victims in Myanmar. We donated eggs for 100 households with 10 eggs carton each, in total of 1,000 eggs on this Friday, 30th of July. And also, We Help and Care Organization (WHC) has donated 100 Covid-19 Antigen Test Kit worth 800,000 Myanmar Kyats to Nanyun Volunteer Team based in Nanyun Town, Naga Autonomous Region, Sagaing District for the prevention of Covid-19.